သံဃာတော် များ ဘာလို့ ဝါဆိုကြရ သ လဲဆိုသည့် သိမှတ်ဖွယ်ရာ အဖြာဖြာ – Zartiman
ရဟန်းတွေက ဆောင်း၊ နွေ၊ မိုး ဥတုသုံးပါးလုံး ခရီးလှည့်လည်ကြပါတယ်။ လူတွေက ဒီလို ကဲ့ရဲ့ ရှုတ်ချ အပြစ်တင်ကြပါတယ်။ ဒီဘုရား သားတော်ရဟန်းတော်တွေက ဆောင်း၊ နွေ၊ မိုး ဥတုသုံးပါးလုံး ဘာလို့ ခရီး လှည့်လည်ကြတာလဲ။စိမ်းစိုတဲ့ မြက်တွေကို နင်းချေကာ ကာ ယိနြေ္ဒတစ်ခု ရှိတဲ့သတ္တဝါကို ညှဉ်းဆဲကြတယ်။ သတ္တဝါ ငယ်လေးများစွာကို ညှင်းဆဲနှိပ်စက်ကြတယ်။ဒီသာသနာပ တိတ္ထိတွေဟာ မိုးခို ကြသေးတယ်။ ဒီငှက်တွေဟာ သစ်ပင်ဖျားတွေမှာ အသိုက်တွေပြုလုပ်ပြီး မိုးခိုကြသေးတယ်။
လူတွေရဲ့ အဲဒီကဲ့ရဲ့သံကို ရဟန်းတွေကြား ရလို့ ဘုရားရှင်အား လျှောက်ထားကြတဲ့အခါ ရဟန်းတွေမိုးအခါမှာ မိုးခိုဖို့ (ဝါဆိုဖို့) ခွင့်ပြု တော်မူခဲ့ပါတယ်။သံဃာတေ်ာများနှင့် ဝါဆိုခြင်းအဓိပ္ပါယ်။ဝါထပ်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်တာပါလဲ။ ဘာကြောင့် ထပ်ရတာပါလဲ ? ဝါ ကပ်တာ(ဝါဆိုတာ) ကဘယ်နှမျိုး ရှိပါသလဲ ?ဘယ်လို ရှင်၊ရဟန်းကပစ္ဆိမဝါ(ဒုတိယဝါ)ကို ကပ်နိုင်ပါတယ် ?ဘုရားရှင်က ဘာ့ကြောင့် ဝါဆိုဖို့ ခွင့်ပြုတော် မူ ခဲ့တာပါလဲ ?မေး။ ။ ဝါထပ်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်တာပါလဲ။ ဘာကြောင့် ထပ်ရတာပါလဲ။
ဖြေ။ ။ ဝါခေါင်လကို ဝါခေါင်လလို့မပြု ဘဲ’ ဝါဆိုလ’လို့ ထပ်ပြီ့းပြုတာကို’ဝါထပ်တယ်’လို့ခေါ်စမှတ် ပြုကြတာပါပဲ။အဲဒီလို ဝါဆိုလ နှစ်ထပ်ဖြစ်ရတာမှာလည်းရက် မစုံလတွေကို ပြန်ပြီးအစားပေးသောအားဖြင့် ကောင်းကင်ကနေ သွား ၊ လ သွားနဲ့ ကိုက်ညီစေလိုလို့ပါပဲ။ (မဟာဝါ ဘာသာဋီကာ(ဒု)၊ ၅ )မေး။ ။ ဝါကပ်တာ(ဝါဆိုတာ)ကဘယ်နှမျိုး ရှိပါသလဲ။ဖြေ။ ။ ပုရိမဝါ ကပ်ခြင်း၊ပစ္ဆိမဝါ ကပ်ခြင်းလို့ ဝါ ကပ်ခြင်း ၂ မျိုး ရှိပါတယ်။ ဝါဆို လပြည့်ကျော်တစ်ရက်နေ့မှာ ဝါကပ်တာဟာ ပုရိမဝါကပ်တာ (ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့ဝါကပ်တာ) ပါပဲ။
ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် တစ်ရက်နေ့မှာ ဝါ ကပ်တာဟာ ပစ္ဆိဝါကပ်တာ (နောက်ဖြစ်တဲ့ ဝါကပ်တာ)ပါပဲ။(ခုဒ္ဒသိက္ခာ ဘာသာဋီကာ၊ ၃၉၅) မေး။ ။ ဘယ်လို ရှင်၊ရဟန်းကပစ္ဆိမဝါ(ဒုတိယဝါ)ကို ကပ်နိုင်ပါတယ်။ဖြေ။ ။ ပုရိမဝါ ကျိုးပျက်တဲ့ ရဟန်းနဲ့ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ပုရိမဝါ မကပ်ခဲ့တဲ့ ရဟန်းဟာ ပစ္ဆိမဝါ(ဒုတိယဝါ)ကို ကပ်နိုင်ပါတယ်။(ခုဒ္ဒသိက္ခာ ဘာသာဋီကာ၊ ၃၉၈)မေး။ ။ ဘုရားရှင်က ဘာ့ကြောင့် ဝါဆိုဖို့ ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့တာပါလဲ။ဖြေ။ ။ ဘုရားရှင်က ရာဇဂြိုဟ်မြို့ ဝေဠုဝန်ကျောင်းမှာ သီတင်းသုံး တော်မူပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဘုရား ရှင်က ရဟန်းတွေအား ဝါဆိုဖို့ ခွင့်မပြုရသေးပါ။
(မဟာဝါ ဘာသာဋီကာ(ဒု)၊ ၁၉၂)အညတရအရှင်သောပါကမြိုင်
ရဟနျးတှကေ ဆောငျး၊ နှေ၊ မိုး ဥတုသုံးပါးလုံး ခရီးလှညျ့လညျကွပါတယျ။ လူတှကေ ဒီလို ကဲ့ရဲ့ ရှုတျခြ အပွဈတငျကွပါတယျ။ ဒီဘုရား သားတျောရဟနျးတျောတှကေ ဆောငျး၊ နှေ၊ မိုး ဥတုသုံးပါးလုံး ဘာလို့ ခရီး လှညျ့လညျကွတာလဲ။စိမျးစိုတဲ့ မွကျတှကေို နငျးခကြော ကာ ယိန်ဒွတေဈခု ရှိတဲ့သတ်တဝါကို ညှဉျးဆဲကွတယျ။ သတ်တဝါ ငယျလေးမြားစှာကို ညှငျးဆဲနှိပျစကျကွတယျ။ဒီသာသနာပ တိတ်ထိတှဟော မိုးခို ကွသေးတယျ။ ဒီငှကျတှဟော သဈပငျဖြားတှမှော အသိုကျတှပွေုလုပျပွီး မိုးခိုကွသေးတယျ။
လူတှရေဲ့ အဲဒီကဲ့ရဲ့သံကို ရဟနျးတှကွေား ရလို့ ဘုရားရှငျအား လြှောကျထားကွတဲ့အခါ ရဟနျးတှမေိုးအခါမှာ မိုးခိုဖို့ (ဝါဆိုဖို့) ခှငျ့ပွု တျောမူခဲ့ပါတယျ။သံဃာတျောမြားနှငျ့ ဝါဆိုခွငျးအဓိပ်ပါယျ။ဝါထပျတယျဆိုတာ ဘာကိုချေါတာပါလဲ။ ဘာကွောငျ့ ထပျရတာပါလဲ ? ဝါ ကပျတာ(ဝါဆိုတာ) ကဘယျနှမြိုး ရှိပါသလဲ ?ဘယျလို ရှငျ၊ရဟနျးကပစ်ဆိမဝါ(ဒုတိယဝါ)ကို ကပျနိုငျပါတယျ ?ဘုရားရှငျက ဘာ့ကွောငျ့ ဝါဆိုဖို့ ခှငျ့ပွုတျော မူ ခဲ့တာပါလဲ ?မေး။ ။ ဝါထပျတယျဆိုတာ ဘာကိုချေါတာပါလဲ။ ဘာကွောငျ့ ထပျရတာပါလဲ။
ဖွေ။ ။ ဝါခေါငျလကို ဝါခေါငျလလို့မပွု ဘဲ’ ဝါဆိုလ’လို့ ထပျပွီ့းပွုတာကို’ဝါထပျတယျ’လို့ချေါစမှတျ ပွုကွတာပါပဲ။အဲဒီလို ဝါဆိုလ နှဈထပျဖွဈရတာမှာလညျးရကျ မစုံလတှကေို ပွနျပွီးအစားပေးသောအားဖွငျ့ ကောငျးကငျကနေ သှား ၊ လ သှားနဲ့ ကိုကျညီစလေိုလို့ပါပဲ။ (မဟာဝါ ဘာသာဋီကာ(ဒု)၊ ၅ )မေး။ ။ ဝါကပျတာ(ဝါဆိုတာ)ကဘယျနှမြိုး ရှိပါသလဲ။ဖွေ။ ။ ပုရိမဝါ ကပျခွငျး၊ပစ်ဆိမဝါ ကပျခွငျးလို့ ဝါ ကပျခွငျး ၂ မြိုး ရှိပါတယျ။ ဝါဆို လပွညျ့ကြျောတဈရကျနမှေ့ာ ဝါကပျတာဟာ ပုရိမဝါကပျတာ (ရှမှေ့ာဖွဈတဲ့ဝါကပျတာ) ပါပဲ။
ဝါခေါငျလပွညျ့ကြျော တဈရကျနမှေ့ာ ဝါ ကပျတာဟာ ပစ်ဆိဝါကပျတာ (နောကျဖွဈတဲ့ ဝါကပျတာ)ပါပဲ။(ခုဒ်ဒသိက်ခာ ဘာသာဋီကာ၊ ၃၉၅) မေး။ ။ ဘယျလို ရှငျ၊ရဟနျးကပစ်ဆိမဝါ(ဒုတိယဝါ)ကို ကပျနိုငျပါတယျ။ဖွေ။ ။ ပုရိမဝါ ကြိုးပကျြတဲ့ ရဟနျးနဲ့ အကွောငျးတဈခုခုကွောငျ့ ပုရိမဝါ မကပျခဲ့တဲ့ ရဟနျးဟာ ပစ်ဆိမဝါ(ဒုတိယဝါ)ကို ကပျနိုငျပါတယျ။(ခုဒ်ဒသိက်ခာ ဘာသာဋီကာ၊ ၃၉၈)မေး။ ။ ဘုရားရှငျက ဘာ့ကွောငျ့ ဝါဆိုဖို့ ခှငျ့ပွုတျောမူခဲ့တာပါလဲ။ဖွေ။ ။ ဘုရားရှငျက ရာဇဂွိုဟျမွို့ ဝဠေုဝနျကြောငျးမှာ သီတငျးသုံး တျောမူပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ ဘုရား ရှငျက ရဟနျးတှအေား ဝါဆိုဖို့ ခှငျ့မပွုရသေးပါ။
(မဟာဝါ ဘာသာဋီကာ(ဒု)၊ ၁၉၂)အညတရအရှငျသောပါကမွိုငျ
မတော်တဆ ကိုဗစ်သံသယကြောင့် Qဝင်ရလျှင် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားသင့် သည်များ
အမျိုးသမီးတွေ ရဲ့ ထဘီတန်းအောက် ဝင်ရင် ဘုန်းကံ နိမ့်တယ်/မနိမ့်ဘူးဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းချက်